फर्सीको मुन्टा र गटा खानुका आश्चर्यजनक फाइदाहरू जान्नुहाेस् - ज्ञानविज्ञान
तपाई साग कतिको खानु हुन्छ र तपाईलाई कुन साग सबैभन्दा बढी मन पर्छ ? हुन त बजारमा वा तपाईँको करेसाबारीमा विभिन्न प्रजातीका सागहरु सजिलै पाउन सकिन्छ । तर, तपाईँले प्रयोग गर्ने सागहरुको प्रजातिमध्ये एक हो फर्सीको मुन्टा वा भनौँ फर्सीको पातको साग ।
Topics #फर्सी #फर्सीको मुन्टा र गटा #फर्सीको मुन्टा र गटा खानुका फाइदा #फर्सीको मुन्टाकाे फाइदा
Don't Miss it घरपालुवा कुकुर रातमा भुक्नुको कारण यस्तो छ एकचाेटि अवस्य पढ्नुहाेस् ।
यी ५ प्रकारका फलफूलले छालामा चमक ल्याउछ
मेवा : पवित्र फलको रुपमा चिनिने मेवामा प्राकृतिक रुपमा पोषणयुक्त तत्वहरु हुन्छन। मेवाले तौल घटाउन र मुटुको रक्षासमेत गर्छ ।…
के तपाइलाई पनि ढाड दुख्छ ?
हामीमध्ये धेरैलाई कहिलेकाहीँ ढाड दुख्ने समस्या हुन्छ । यो कसैलाई कम हुन्छ भने कसैलाई बढी भएर औषधी नै खानुपर्ने अवस्था…
1. बेलुकीको खाना खाइसकेपछि जंकफुड खाने गल्ती कहिल्यै गर्नु हुँदैन । 2. कतिपयले खानापछि चिया-कफी लिने गर्छन्, जसलाई स्वस्थकर मानिँदैन…